अहा, पत्र-मित्रताको त्यो युग ! अहो, फेसबुक फ्रेण्डसिपको यो युग ! २५ बर्ष अगाडीको हास्यव्यंग्य « Gajureal
अहा, पत्र-मित्रताको त्यो युग ! अहो, फेसबुक फ्रेण्डसिपको यो युग ! २५ बर्ष अगाडीको हास्यव्यंग्य
प्रकाशित मिति: ३० बैशाख २०७५, आईतवार १७:३१
‘पत्र–मित्रता’ क–कसलाई थाहा छ ? क–कसले हवाईपत्रको प्रयोग गर्नु भएको छ ? को को हुलाक गएको संझनु हुन्छ ? हुलाकी आउँदा क–कसको धड्कन बढ्थ्यो ? प्रेमपत्र लेख्दा रात बिताउने कति जना हुनुहुन्छ ? एसएलसी दिएर छुट्टिने बेलामा भरेको अटो को–कोसँग सुरक्षित छ ? पिसिओमा फोन गरेर आफन्त बोलाई मागेको क–कसलाई संझना छ ? गुन्द्रीमा बसेर दुरदर्शनबाट ‘रामायण’ को को हेर्नुहुन्थ्यो ? २–२ रुपैंया उठाएर एसिड बेट्री चार्ज गरी ‘टाढाको वस्ती’ हेरेको क–कसलाई याद छ ? छैन भने बेलाबेला त्यस्ता ईतिहासहरु संझिने गर्नोस्- मष्तिष्क बलियो हुन्छ, स्मरण शक्ति तेज हुन्छ, मनमा आनन्द आउँछ ।
‘पत्र–मित्रता’बाट गाँसिएको संबन्ध ‘फ्रेण्डलिष्ट’को भन्दा बलियो हुन्थ्यो । हवाईपत्रमा हातले लेखिएको भावना मोबाईल म्यासेजभन्दा बलियो लाग्थ्यो । छिनछिनमा बज्ने रिंगटोनभन्दा कहिलेकाहीं बज्ने हुलाकीदाईको साईकलको घण्टी सुमधुर लाग्थ्यो । चौबिसै घण्टा वाईफाईमा झुण्डिनुभन्दा शनिबार दिउँसो एटिभीबाट आउने फिलिम हेर्नु अर्कै मज्जा थियो । प्रत्येक पोष्टमा लाईक र कमेण्टको झण्झटभन्दा रंगीन खाममा कैलेकाहीं सादा फोटोहरु आदान-प्रदान गर्नुको मज्जै अर्को हुन्थ्यो । भाइबरको टुङ्टुङ् भन्दा बेलाबेलाको गुनगुन मिठो हुन्थ्यो ।
यसको अर्थ यो हैन कि बिज्ञान र प्रबिधिको बिकास नहुनु पर्दथ्यो । आधुनिकता र बिकास समयको माग हो । समयसँग हिंड्न नसक्ने र परिस्थितिसँग भिंड्न नसक्ने मान्छे पछि पर्छ तर परिस्थिति र समयलाई जर्बजस्ती जितेर अगाडी बढ्ने मान्छेपनि टुंगोमा पुग्दैन । त्यसैले बिगतबाट सिक्दै, , वर्तमानबाट शिक्षा लिंदै भविस्यको बाटो तय गर्नु पर्दछ ।
प्रसंग ‘रकेट’ हास्यव्यंग्य पत्रिकाको पुरानो अंक भेटिएको हो । बरिष्ठ हास्यव्यंग्यकार लक्ष्मण गाम्नागेद्धारा सम्पादित ‘रकेट’ २०४४ सालदेखीशुरु भयो । मेरो पहिलो हास्यव्यंग्य यसै पत्रिकामा छापिएको थियो । त्यस बेलाका हास्यब्यंग्य कस्ता थिए, म क्रमस: राख्ने छु । अहिले भने २५ बर्ष अघिको ‘पत्र–मित्रता’ शिर्षकको एउटा हास्यव्यंग्य पढेर आनन्द लिनोस् ।
(बुद्धि बिग्रिएकाहरुले निम्न व्यक्तिहरुसँग सम्पर्क राखी मित्रता गाँसी आफ्नो जिन्दगीलाई सार्थक बनाउनु होस् ।)
नाम: टाँटरीनाथ गजुरेल ‘कानजुँगे’
उमेर: ४२ बर्ष ३ महिना ३३ दिन
रुची: आप, केरा, ठर्रा र गहतको झोल
ठेगाना: टेकुनालाको उकालो, धनकुटा
नाम: टुकीमाया टपरी
उमेर: २९ बर्ष १७ दिन
रुची: पत्र–मित्रता, लभ अफेयर्स, सिनेमा, केटाहरुलाई खौरिनु
योग्यता: चौथो पटक एसएलसी दिई सकेकाले सोझै पिएचडिमा भर्ना हुने
ठेगाना: धुपछाँया सिनेमा हल
नाम: किसन पर्साद भुतराई
उमेर: ५५ देखी ६० जति
रुची: राजनीति गर्दा गर्दै हैरान भएको, बुढेसकालमा सहाराको निम्ति षोडसी नभए ४०, ५० कै भएपनि चाहियो
ठेगना: जमल, काठमाण्डु
नाम: सुश्री धुसा तिनपाथी
उमेर: ३० ३२ बिच
रुची: साहित्यमा भएपनि एउटा योग्य भुस्तिघ्रे वरको खोजी
ठेगाना: टुंगो लाग्न बाँकी
नाम: सुश्री …ता पाँडे
रुची: रमाईलो खाले साहित्य लेखन । मित्र बनाउने चाहाना तर, बन्दै छोड्दै गर्नेहरुमात्र छन्
ठेगाना: बेटुंगै छ अझै